Database toy ny serivisy (DaaS)
Alakamisy, May 27, 2010 Alarobia, Novambra 5, 2014 Douglas Karr
Roa herinandro lasa izay, nahafinaritra ahy ny nihaino ny Chief of Operations an'ny ExactTarget, Scott McCorkle, niresaka momba ny fivoaran'ny sehatr'izy ireo. Nanoratra tamin'ny lasa aho fa mino Ireo mpanome tolotra mailaka dia nitsambikina ny antsantsa - ary hita fa ireo ESPs mieritreritra mialoha dia efa nanamarika.
Scott dia niresaka tamin'ny tanjon'ny ExactTarget dia ny Marketing Hub ho an'ny orinasa. Raha tokony ho maotera mandefa mailaka fotsiny ianao dia manosika ny ExactTarget ho tahiry fandraisam-peo ho an'ny maro amin'ireo mpanjifany miaraka amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Fanangonana sy fidirana data - amin'ny alàlan'ny API feno, fanitarana angon-drakitra matanjaka ary fotodrafitrasa matanjaka sy matanjaka, azo atao izao ny orinasa hampiantrano sy hampiasa ny ExactTarget ho loharano azo antoka sy mifanaraka amin'ny fitehirizana ny angon-kevitr'ireo mpanjifany.
Fitsipika momba ny fifandraisana - satria ny ExactTarget dia mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny mailaka, feo, SMS ary media sosialy, ny tahirin-kevitra momba ny fitondran-tena dia azo sintonina, tehirizina ary ampiasaina hanatsarana ny fifandraisan'ny hafatra ho an'ireo mpanjifa ireo.
Fanaterana ny serasera - ExactTarget no manana rafitra rafitra fitantanana mailaka haingana indrindra ao amin'ny indostria ary mipoaka ny maodeliny OEM noho ny fahombiazan'ny rafitra. Niampy an'ity dia ny Voice, SMS ary, taorian'ny fividianana CoTweet, angamba fandefasan-kafatra media sosialy.
Fatra mihoatra ny rehetra - ExactTarget dia mitady hamita ny faribolana amin'ny alàlan'ny famatsiana fandrefesana matanjaka amin'ny fifandraisana ivelany rehetra.
Ny fitehirizana angon-drakitra dia hita ho voajanahary amin'ny lozisialy ho serivisy Fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) serivisy, fa ny indostria hafa kosa dia miroso amin'izao lalana izao. Ny mpamatsy Analytics, Webtrends, dia nanangana ny Mart ny Data mpitsidika, mamela ny fizarazarana mafy mitete sy milatsaka izay natsangana mivantana tamin'ny vokatra. Webtrends dia manana REST ambony API ary, miaraka amina motera Analytics mitarika anao, ny fampiantranoana ny angon-drakitra mpanjifanao amin'ny Webtrends dia manome mpivarotra be pitsiny fitaovana matanjaka sasany hikendrena sy handrefesana ny fifandraisana.
Database amin'ny maha serivisy azy dia natomboka taona vitsivitsy lasa izay niaraka tamin'ny mpamatsy toa an'i Amazon sy Google manolotra tahiry fifandraisan-davitra tsotra atolotry ny rahona. Tsara sy tsara izany rehetra izany, saingy raha tsy misy ny fampiharana hampiasana izany angona izany dia tena tsy nanana ny fananganana an-tsokosoko toa izao ny indostria noheverin'ny olona fa. Ny tombony azon'ny orinasa toa ny ExactTarget sy Webtrends dia ny nanaporofoany ny fifandraisana sy Analytics vokatra efa napetraka over ny DaaS.
Na dia manana fampidirana mafy aza ireo mpamatsy rehetra ireo, dia toa mihabe hatrany ny fifaninanana hanjary loharanom-pahalalana ho an'ny mpanjifa voalohany. Ireo mpamatsy ecommerce, CRM, Email ary Analytics dia samy hanery ny ho tonga tahiry fandraisam-peo ary samy hanolotra serivisy hitahiry ny angon-drakitrao izy rehetra, hanome hafatra mafonja ary Analytics ho an'ny angon-drakitrao. Izay manana ny angona dia manana ny mpanjifa - noho izany SaaS mpamatsy tolotra manosika ho lasa Database satria mpanome tolotra dia hipoaka amin'ny taona manaraka. Paikady tsara ho an'ny mpamatsy SaaS izany satria lasa sarotra kokoa ny mifindra monina na mandao ny mpamatsy anao raha vantany vao mampiantrano ny data-nao!
Tags: appsgeyserFindmyshiftgoogle plus badgeboky marketingfikarohana fikarohanaSearch MarketingTatitra ara-tsosialywistiawpengine
Haptic feedback: Ny fivoaran'ny touchscreens